မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးများလုံခြုံရေး အမေရိကန်က အာမခံရန် အကြံပြုချက် WikiLeaks ဖော်ပြ — မြန်မာဌာန
မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးများလုံခြုံရေး အမေရိကန်က အာမခံရန် အကြံပြုချက် WikiLeaks ဖော်ပြ
မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေ နိုင်ငံရေးအာဏာကနေ ခွာနိုင်ဖို့အတွက် သူတို့နဲ့ သူတို့မိသားစုတွေရဲ့ အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ် လုံခြုံရေးကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက အာမခံမှာ ဖြစ်ကြောင်း ကမ်းလှမ်းသင့်တယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန်သံရုံးက ဝါရှင်တန်ကို ပေးပို့ခဲ့တဲ့ ကြေးနန်းစာမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း WikiLeaks အင်တာနက်သတင်း စာမျက်နှာက ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ၊ မြန်မာ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ ယခင် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
၂၀၀၈ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့ က အမေရိကန်သံအမတ် Shari Villarosa လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမှု ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပေးပို့ခဲ့တဲ့ လျှို့ဝှက်ကြေးနန်းစာမှာ အဲဒီလို ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူထုကို ကယ်တင်ဖို့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတာမျိုး မျှော်လင့်လို့ မရနိုင်ကြောင်း၊ ထိပ်တန်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို မြင်ကွင်းက ပျောက်သွားဖို့ ဆိုရင် သူတို့နဲ့ သူတို့ မိသားစုဝင်တွေအတွက် လုံခြုံရေးအာမခံချက်ကို ချပြဖို့ မိမိတို့ စဉ်းစားသင့်ကြောင်း၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆီကို ဦးတည်နေတာနဲ့အမျှ၊ အခုအချိန်ဟာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ အဲဒီလို လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်တွေအကြောင်း ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့အတွက် မဟာဗျူဟာကျတဲ့ အချိန်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့ ဆိုတာ စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်ဖို့ကောင်းသော်လည်း၊ မြန်မာပြည်ကို သူတို့က တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ချုပ် ကိုင်ထားတာရယ်၊ ဒီမိုကရက်တစ် အတိုက်အခံကလည်း အားနည်းလှတာရယ်ဟာ မြန်မာပြည် ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွက်ရာမှာ စဉ်းစားရမဲ့ လက်တွေ့အရှိတရားတွေ ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားတာကို WikiLeaks အင်တာနက်သတင်း စာမျက်နှာက ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူ ခုနစ်သိန်းကျော်အတွက် အမေရိကန်က ဒေါ်လာသန်း ၅ဝ ကူညီ
မြန်မာစစ်တပ်လုပ်ရပ် လက်ခံနိုင်စရာမရှိကြောင်း အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဝေဖန်
ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ ငွေစက္ကူတွေ လှည့်လည်သုံးစွဲမှု နည်းပါးနေ
Oh my God ! Is it fair to myanmar poor citizens?
ဘာမှ မကြောက်နဲ့ ငါတို့ မြန်မာလှုမျိုးတွေဟာ ကိုယ်ချင်းစာတရား၇ှိပါတယ် မင်းတို့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ကြိုးစင်တင်ပေးတာကလွဲပြီး ဘာမှမလုပ်ရဲပါဘူး